Xildhibaan Prof Gaandi”Dowladda Waxay Bur-Burineysaa Federaalka!! – War La Helaa Talo La Helaa
Xildhibaan Prof Gaandi”Dowladda Waxay Bur-Burineysaa Federaalka!!
By madoobe	 On Sep 12, 2018
Kadib Warmurtyeedkii ka soo baxay shirkii Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa waxaa soo baxaya kala aragti duwanaansho ka dhalatay qodobadaa ka soo baxay shirkaas ,kaas oo u dhaxeeya Xildhibaanada Federaalka iyo Siyaasiyiinta qaarkood.
XIldhibaan Prof Maxamed Cabdi Gaandi oo ka mid ah mudanayaasha Golaha Shacabka ayaa waxa uu dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay ku howlan tahay duminta Dowlad Goboleedyada dalka ka jira,isla markaana ay jeceshay in dowladdu inay Madaxda Maamul goboleedyada ula dhaqanto sidii inay yihiin guddoomiyeyaal degmo.
Isaga oo sii hadlayay ayuu sheegay inay meesha ka baxday inay wadatashi kala sameyso Go’aano kasta oo ay gaareyso Madaxda Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada,waxana uu shaaciyey in wax walba oo ka dhasha Go’aankii shirka Kismaayo ay eedeeda qaadaneyso dowladda Federaalka Soomaaliya.
Geba gabadii XIldhibaan Prof Maxamed Cabdi Gaandi waxa uu sheegay in warkii maalmo kahor Kismaayo uu ka sheegay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(madoobe) ee ahaa in dowladda qalqal gelin amni ka wado deegaanada Jubbaland uu yahay mid dhab ah.
Aqalka Sare oo Wafdi u diraya Maamul goboleedyadda
Sawirro:-Cabdiweli Gaas“doorasho hal qof iyo hal cod ah waxa ay ka dhici kartaa kaliya Puntland”